Ogaden News Agency (ONA) – Wargayskii KAAH iyo Doorka uu ku Lahaa Wacyigalinta Bulshada – Yaase Qori Jiray !
Wargayskii KAAH iyo Doorka uu ku Lahaa Wacyigalinta Bulshada – Yaase Qori Jiray !
Wuxuu kaga hadlay khudbadii Gudoomiyaha ee munaasabadda 30Gurrada asaaska ururka marxaladihii kala duwanaa ee ururka uusoo maray. Waxaana ka mid ahayd inuu tilmaamay in 6dii sanee uu ururka qarsoodiga ahaa lagu sidii loogu diyaarin lahaa bulshada halgan gobanimadoon oo ka duwan midkay garanayeen ee ahaa in ciidan xoogan oo dagaalama la noqdo, arimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo wacyigalinta bulshada iyo Warfaafintana loo daayo dawladihii Somaliyeed oo mabda’a ahaan u aamnisanaa in dalalka maqan la xoreeyo. Wuxuu yidhi Gudoomiyaha;
” Duruufihii jiray awgood ururka markii la aasaasay kadib muddo lix (6)sanadood ah ayuu hab qarsoodi ah, hawsha ku waday. Mudadaas hawsha ugu weyn ee ururku qabanayay waxay ahayd diyaarinta dokumentigii ururka, abuurid xubnihii ururka saldhiga iyo hogaaminta u noqon lahaa iyo in shacabka la kasbado loona diyaariyo halgan dheer.”
Hadaba waqtigaa isaga ah maxay ahayd aaladda (tools) la adeegsanayay si dadweynaha loo gaadhsiiyo barnaamijka ururka oo loogu sheego inay jirto hab ka duwan habkii hore oo loo halgami doono.
Shirkii ugu horeeyay ee xubnihii ururka ee dibadda ka dhismay ay ku yeesheen Dimishiq ayaa lagu go’aansaday in la sameeyo Wargays ku hadla afka Jabhadda oo lagu tabiyo ujeedada JWXO islamarkaana loogu sheego dadweynaha shirqoolada kusoo fooleh halganka shacabka S.Ogadenya, ka dib marka ay ka heshiiyaan labada dawladood ee Somaliya iyo Itobiya arimaha la xidhiidha mucaaradka labada dal.
Wargayskaa oo loo bixiyay KAAH.
Inta aanan faallo yar idinka siinin wargayska KAAH iyo doorkuu ku lahaa wacyigalinta, aan xoogaa yar idiin dul maro xaaladda siday ahayd waqtigaa. Horta jaaliyadii ugu horeysay ee caalamka ama JWXO ay yeelato oo hab jaaliyadeed isu maamula waxaa laga dhisay Doxa/Qatar, taariikhda markay ahayd 1985kii. Sababtana waxay ahayd iyagoo urur ahaan u shaqeeya oo magac jabhadeed (PALO) wata ayay la kulmeen xubnihii asaasayaasha JWXO oo uu ka mid ahaa mudane C/raxmaan Madey iyo Allaha u naxariistee Cabdi Ibraahim Geelle. Halkaa ayayna kaga mid noqdeen JWXO oo ururkii ay doonayeen inay asaasaan ee PALO kaga tageen.
Hadaba, Jaaliyadii Doxa waxaa loo xilsaaray waqtigaa inay bixiyaan kirada xafiiska lagu qoro KAAH iyo kharashka ku baxaya soo saaridda wargayska, meesha loo xilsaaray qoridiisa xubnihii jaamacadaha kaga jiray Suuriya ee Dimishiq oo hadda uu nagala joogo mudane Cadaani, waxaana ka mid ahaaintaan ka xasuusto Ismaaciil, Badri iyo Taflow. Qoridda wargayska iyo daabacadiisa intaba waagaa waxay ahayd arin dhib badan oo ma jirin aaladahan hadda fududeeyay. Sidoo kale marka la daabaco, waxay soo dhigi jireen Boostada iyagoo u kala diri jiray goobaha ay joogaan dadkeena iyo gudaha gaar ahaan xeryaha qaxootiga.
Hadaan yarehe fiirino, nuqulkii 2aad ee KAAH oo ah midka aan hadda idiin hayo, sidaad aragtaan canaawiinta ay soo qoreen waxay ahaayeen;
Baahi Halgan baa Abuurtay JWXO
Waaberyay Sacabo Laguma Qarinkaro.
Burburinta Aayaha Ubadka Qoxootiga
Waxaa ka mid ah Badheedhaha Qoraha weedhan;
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya kuma imanin rabitaan shaqsi ama kooxeed, balse waxaa keentay baahi halganeed oo dhinac kastaba ah. waxay Jabhaddu u istaagtay inay ku rido halganka jid toosan, saxdana aragtiyaha khaldan iyo tilmaamaha beenta ah ay ka bixisay danaysatada iyo gumaysiga. Waxay u istaagtay jabinta darbigii lagu xeeray iyo mugdigii mudada dheer lagu dhex hayay qadiyadda shacbiga Ogadenya, iyadoo u bandhigaysa caalamka xaqiiqada qadiyada shacbiga Ogadenya.
Waxaa isweydiintu tahay, maku guulaysatay JWXO arintaa uu waagaa kaga hadlay qoraaga badheedhadha KAAH nuqulkiisii 2aad.
Hadaan soo qaadano qodobka ah; BURURINTA AAYAHA UBADKA QAXOOTIGA OGADENYA, oo ah cinwaan taariikhi ah, wuxuu ka hadlayaa go’aan ka soo baxay Wasaaradda Waxbarshada Somaliya. Wuxuu ku bilaabay wargayska maqaalkiisan;
Waxaa Amakaag iyo naxdin lahayd in Wasaaradda W. & Barbaarinta ee JDS ay soo saarto go’aan ka xaaraantimaynaya Ardayda Qoxootiga ee kusoo dhamaysatay waxbarashada Dugsiga Dhexe Xeryaha Qoxootiga inay helaan waxbarasho Dugsiga Sare. Sida lawada ogyahayna xukuumadda Somaliya waxay ku qaaday xilka waxbarashada Qoxootiga haya’adda Qoxootiga Aduunka “UNHCR” horteda, iyadoo sheegtay inay tiri karto baahida waxbarashada ee Qoxootiga ugana jeeday inay ku hesho kaalmo iyo faanfaanin.
Wargayskii KAAH ee waqtigaa jiray wuxuu buuxiyay kaalin dhaxal gal ah wuxuuna waajibaad aan lasoo koobi karin. Nuqulkan iyo nuqula kale oo taariikhi ahba waxaa lagu hayaa kaydka Hogaanka Warfaafinta oo xubinkii doonaya inuu u kaydiyo ubadkiisa uu kasoo codsan karo.
Waxaa hubaal ah sida uu sheegay Gudoomiyaha inay JWXO ku guulaysatay marxaladihii kala duwanaa ee ururka uu soo maray.
La socda qormooyinka dambe een kaga hadli doono taariikhihii kala duwanaa ee ururka uusoo maray.